Tag: na-elekọta mmadụ media | Martech Zone
Tag: soshal midia nke di elu
Nke bụ eziokwu bụ na ị naghị ere ahịa na ntanetị mgbasa ozi ma ị nwere ike iwepụta ahịa site na mgbasa ozi mmekọrịta ma ọ bụrụ na ị mejuputa usoro njedebe zuru ezu. Usoro PRISM 5 anyị bụ usoro ị ga - eji wee meziwanye mgbanwe mgbasa ozi mmekọrịta. N'isiokwu a, anyị ga-akọwapụta usoro ịkwụ ụgwọ 5 ma gafere site na ngwaọrụ atụ ị nwere ike iji maka usoro ọ bụla nke usoro ahụ. Nke a bụ PRISM: Iwuo PRISM gị
Ọ bụrụ n ’ị na-eche etu ndị na - ere ahịa na - elele mmekọrịta ọhaneze maka azụmaahịa ha anya, Hubspot weputara foto ihe osise iji gosipụta ụfọdụ nsonaazụ sitere na ndị nyocha 6,491 nke nyocha nke Moz mere. E wepụtara data ahụ na webinar njikọta n'etiti Hubspot na Moz taa. Otu ihe na-adọrọ mmasị, 44.4% nke ndị zaghachiri ajụjụ ahụ kwuru na ọkwa ọkwa ha na mgbasa ozi mmekọrịta dị na ọkwa dị elu ma ọ bụ ọkachamara! Infographic si: HubSpot Software Software. Ngọnarị: Anyị
Emere m ụfọdụ nyocha nke blọọgụ m na ngwụcha izu a iji chọọ mmekọrịta dị n'etiti nsonaazụ ọchụchọ m, ihe kacha ewu ewu na ntanetị, ihe ndị kachasị ewu ewu, na posts nke kpatara nsonaazụ n'ihi ịjụ ma ọ bụ ikwu okwu. Enweghi mmekorita. N'ịtụleghachi akwụkwọ ndị kachasị ewu ewu, ị ga-ahụ WordPress Kpọtụrụ Formdị, Huntington Bank Sucks, M hapụrụ Basecamp, na ogologo nke Adreesị Email na-ebu ọtụtụ okporo ụzọ.